Gịnị bụ Colblindor? - 💡💻 Iris - Software maka Eye nchedo, Health na Productivity 🛌👀
Gịnị bụ Colblindor?
Agba isi na-emekarị na-adị mgbe a mmadụ abụghị ike ịhụ na agba na a ọkọlọtọ mode.
The agba isi na-mara dị ka a na agba erughi.
Nsogbu a na-eme mgbe mmadụ na-enweghị ike ọdịiche dị n'etiti ụfọdụ na agba.
The nsogbu n'ozuzu n'agbata elu na dị iche iche shades nke reds, na mgbe ụfọdụ na-acha anụnụ anụnụ shades.
Ọwọrọ, e nwere abụọ mkpụrụ ndụ ugbu a na anyị retina.
Ma nke mkpụrụ ndụ na-eji iji chọpụta ìhè. Ndị a na-akpọ na-akpọ cones na mkpara. The mkpara ịchọpụta na ọchịchịrị na ìhè na dị nnọọ anabata ala ìhè ụgbọ elu. The cone mkpụrụ ndụ na-eji iji chọpụta na agba.
Ndị a mkpụrụ ndụ na-lekwasị ke center nke gị ọhụụ. n'ozuzu, e nwere atọ ụdị nke cones na-ahụ na agba i.e. green, acha anụnụ anụnụ na-acha uhie uhie.
Ụbụrụ na-eji ọsọ ọsọ si ndị a cone mkpụrụ ndụ, iji gosi anyị na agba nghọta.
Olee otú agba isi ime?
The agba sightlessness nwere ike na-emekarị-eme mgbe otu ma ọ bụ karịa otu na agba cone mkpụrụ ndụ na-anọghị, ịchọpụta a dị iche iche na agba karịa ọkọlọtọ ma ọ bụ na-adịghị arụ ọrụ nke ọma.
The obi ọjọọ na agba isi pụtara na mgbe mgbe niile atọ cone mkpụrụ ndụ na-efu efu.
The nwayọọ na agba sightlessness na-adị mgbe niile atọ cone mkpụrụ ndụ bụ na aka ma otu n'ime cone mkpụrụ ndụ na-adịghị arụ ọrụ na a n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Mgbaàmà nke Agba Blindness
The ịrịba ama nke agba isi ugboro ugboro hụrụ ndị nne na nna mgbe ụmụ na-eto eto. Mgbe ụfọdụ, mgbaàmà bụ otú nta na ha nwere ike ghara ọbụna-ahụ.
The ọsọ mgbaàmà nke na agba isi ekwukwa:
Complexity na iche iche iche na agba shades.
An enweghi ike ịhụ-aj u na shades nke otu na agba.
Ogo nke agba isi
E nwere dị iche iche akpịrịkpa nke agba sightlessness. The ndị na-nwayọọ ndo insufficiency nwere ike aghọta na agba n'ozuzu na ezi ìhè ma nwere complicatedness na-adịghị ike ìhè.
Ndị ọzọ nwere ike ịkpọ ụfọdụ na agba na ọ bụla ìhè. The agba sightlessness n'ozuzu na-emetụta ma anya na otú ahụ na-anọgide mgbe nile na ha nile ndụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere degrees nke colorblindness, conduct the Vision test available at https://iristech.co/test-vision.
Ọgwụgwọ maka Agba Blindness
E nweghị ihe kwesịrị ekwesị na-ezu ọgwụgwọ maka agba isi.
Special ụdị iko na kọntaktị anya dị na ahịa na aka nke dị iche iche nzacha aka agba erughị eru, ọ bụrụ na achọrọ.
Vision software pụrụ inye aka na ịmata na agba.
Agba Blindness bụghị "Agba Blindness"
Most of the people join the term color blindness to sightlessness and color, nke na-agwa ha, that if you are colorblind or colorblind then you can see only black and white or possibly grayscale pictures.
Ọ bụrụ na anyị nwere a lee anya na okwu ahụ e nwere atọ dị iche iche a maara nke ọma stipulations nke na-eji kọwaa nke a nkwarụ:
Agba Vision Erughi
Ọ bụ ihe kasị kpọmkwem okwu. Ọ na-akọwa anya handicap ruo n'ókè ma ọ na-adịghị nke ọma mata na nkịtị okwu.
Vision https://iristech.co/vision/ will help you deal with the colorblindness deficiency you are suffering from. Download software na ịhụ n'ụzọ doro anya gị na ihuenyo.
Nke a aha na-ewepụtara narị afọ nke 18 na-eme nchọpụta aha ya bụ dị ka John Dalton.
The na-eme nchọpụta bụ colorblind. Onye na-eme ụfọdụ nnyocha na-akọwa na onu na a na nkà mmụta sayensị akwụkwọ maka oge mbụ.
-Akpọ a na-metụtara ihe fọrọ nke nta niile iche nke agba ọhụụ erughi.